Bit By Bit - မေးမေးခွန်းတွေကို - 3.5.3 Gamification
စံစစ်တမ်းများသင်တန်းသားများအဘို့အ boring နေကြသည်; ကြောင်းကိုပြောင်းနိုင်ပြီး, ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်မကွန်ပျူတာအုပ်ချုပ်ခွင့်အင်တာဗျူးများအားဖြင့် facilitated ဖြစ်ကြောင်းတောင်းဆိုနေတာအသစ်ချဉ်းကပ်မှုအကြောင်းကိုပြောပါတယ်။ သို့သျောလညျး, ကွန်ပျူတာအုပ်ချုပ်ခွင့်အင်တာဗျူးများထဲမှကျဘက်ကိုသွေးဆောင်ခြင်းနှင့်ပါဝင်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီရန်အဘယ်သူမျှမကလူ့အင်တာဗျူးလည်းမရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အများအပြားစစ်တမ်းများအချိန်ကုန်ခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့စရာနှစ်ခုလုံးကြောင့်ဤသည်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အနာဂတ်အတွက်စစ်တမ်းကောက်ဒီဇိုင်နာများသူတို့ရဲ့သင်တန်းသားများကိုလှည့်ပတ်ဒီဇိုင်းနှင့်ပိုပြီးပျော်စရာများနှင့်ဂိမ်းကဲ့သို့မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဖို့ရှိသည်သွားနေကြသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတခါတရံ gamification ဟုခေါ်သည်။
ပျော်စရာစစ်တမ်းတူစေခြင်းငှါ, အဘယ်အရာကိုသရုပျဖျောဖို့, ရဲ့ Friendsense, Facebook ပေါ်တွင်ဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ်ထုပ်ပိုးခဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြကုန်အံ့။ Sharad Goel, ဆောင်းရာသီ Mason ဆိုနှင့် Duncan က Watts (2010) ကလူသူတို့မိတ်ဆွေများကကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏နှင့်မည်မျှသူတို့မိတ်ဆွေများကများကဲ့သို့အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်းထင်ဘယ်လောက်ခန့်မှန်းချင်တယ်။ အစစ်အမှန်နှင့်ရိပ်မိသောသဘောထားတူညီအကြောင်းကိုဤမေးခွန်းကိုတိတိကျကျသူတို့ရဲ့လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်ရိပ်မိဖို့လူရဲ့စွမ်းရည်မှာတိုက်ရိုက်ရရှိသွားတဲ့နှင့်နိုင်ငံရေး polarization ကိုနှင့်လူမှုရေးပြောင်းလဲမှု၏ဒိုင်းနမစ်များအတွက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ သဘောတရား, အစစ်အမှန်နှင့်ရိပ်မိသောသဘောထားတူညီတိုင်းတာရန်လွယ်ကူသောအရာဖြစ်၏။ သုတေသီများက၎င်းတို့၏ထင်မြင်ချက်များအကြောင်းကိုလူတွေအများကြီးမေးဖို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆအကြောင်းကို၎င်းတို့၏မိတ်ဆွေများကိုမေးမြန်းပါ (ဒီကိုမှန်ကန်သဘောထားကိုသဘောတူညီချက်တိုင်းတာခြင်းဘို့ခွင့်ပြု), သူတို့မိတ်ဆွေများက '' သဘောထားတွေခန့်မှန်းဖို့ကလူအများကြီးမေးဖို့နိုင် (ဒီရိပ်မိသဘောထားကိုသဘောတူညီချက်တိုင်းတာခြင်းဘို့ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း ) ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, တကတုံ့ပြန်နှင့်သူမ၏မိတ်ဆွေတစ်နှစ်ဦးစလုံးအင်တာဗျူးပို့ဆောင်ထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့်, Goel နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကစားရန်ပျော်စရာခဲ့တဲ့ Facebook မှာ app ကိုစသူတို့ရဲ့စစ်တမ်းလှည့်။
တစ်ဦးပါဝင်သူတစ်ဦးသုတေသနလေ့လာမှုအတွက်ဖြစ်ရဟုဝန်ခံပြီးနောက်, app ကိုတုံ့ပြန်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေမိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုရွေးချယ်နှင့်မိတျဆှေ၏သဘောထား (ပုံ 3.11) အကြောင်းကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်။ ကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်မိတ်ဆွေများကနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေနှင့်အတူရောနှော, တုံ့ပြန်လည်းသူ့ကိုယ်သူအကြောင်းကိုမေးခွန်းများကိုဖြေသည်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးအကြောင်းကိုမေးခွန်းတစ်ခုဖြေဆိုပြီးနောက်, တုံ့ပြန်သူမ၏မိတ်ဆွေတစ်ဖြေကြားဘူးလျှင်, တုံ့ပြန်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သူမ၏မိတ်ဆွေတစ်အားပေးနိုင်ခဲ့သည်, သူမ၏အဖြေကိုမှန်ကန်ခဲ့ရှိမရှိပြောသည်သို့မဟုတ်ခံခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်စုဆောင်းမှုမှတဆင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်စစ်တမ်းကောက်ပျံ့နှံ့။
ပုံ 3,11: အ Friendsense လေ့လာမှုကနေ Interface (Goel, Mason, and Watts 2010) ။ အဆိုပါသုတေသီများဟာပျော်စရာ, ဂိမ်းကဲ့သို့သောအတှေ့အကွုံသို့စံသဘောထားကိုစစ်တမ်းလှည့်။ ဒီ app သင်တန်းသားများကိုအလေးအနက်မေးခွန်းများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဤပုံမှာပြထားတဲ့တစ်ဦးအဖြစ်ကပိုပုံစံမျိုးမေးခွန်းများကို, နှစ်ဦးစလုံးမေးတယ်။ အဆိုပါမိတ်ဆွေများက '' မျက်နှာများရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမှုန်ဝါးခဲ့ကြပြီ။ Sharad Goel ထံမှခွင့်ပြုချက်အားဖြင့်ပြန်ထုတ်ပေး။
အဆိုပါသဘောထားကိုမေးခွန်းများကိုအထွေထွေလူမှုစစ်တမ်းကနေအဆင်ပြေအောင်ခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, "[သင်၏အဆွေခင်ပွန်း] လောအရှေ့အလယ်ပိုင်းအခြေအနေမှာအစ္စရေးနှင့်အတူပါလက်စတိုင်းထက်ပိုပြီးစာနာပါသလား" နှင့် "မယ်ဆိုတာ [သင်၏အဆွေခင်ပွန်း] အစိုးရကတစ်လောကလုံးကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဘို့အမြင့်မားအခွန်ပေးဆောင်?" ထိုအလေးနက်မေးခွန်းများကိုများ၏ထိပ်တွင် "အစားပျံသန်းဖို့ပါဝါ၏, မယ်ဆိုတာ [သင်၏အဆွေခင်ပွန်း] မဟုတ်ဘဲစိတ်ထဲတွင်ဖတ်ရှုဖို့ပါဝါကြသနည်း" နှင့်ဤအမှုပုံစံမျိုးမေးခွန်းတွေကိုလုပ် "မယ်ဆိုတာ [သင်၏အဆွေခင်ပွန်း] အစားဘီယာကျော်စပျစ်ရည်ကိုမသောက်ရ?": သုတေသီပိုပြီးပုံစံမျိုးမေးခွန်းများကိုအတွက်ရောစပ် သဘောထားကသဘောတူညီချက်လေးနက်သောနိုင်ငံရေးမေးခွန်းများကိုနှင့်အရက်သောက်ခြင်းနှင့်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအကြောင်းကိုပုံစံမျိုးမေးခွန်းများကိုများအတွက်အလားတူပါလိမ့်မယ်: ကိုပိုသင်တန်းသားများပျော်စရာလည်းဖြစ်စဉ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်နှိုင်းယှဉ် enabled?
လေ့လာမှုကနေသုံးအဓိကရလာဒ်များရှိခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာ, မိတ်ဆွေများသူစိမ်းထက်တူညီတဲ့အဖြေကိုပေးပိုခဲ့ကြပေမယ့်ပင်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများနေဆဲမေးခွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ 30% အပေါ်သဘောမတူ။ ဒုတိယအချက်မှာဖြေဆိုသူသူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ၎င်းတို့၏သဘောတူညီချက်မတန်တဆ။ တစ်နည်း, မိတ်ဆွေများအကြားတည်ရှိကြောင်းထင်မြင်ယူဆ၏မတူကွဲပြားမှုအများစုသတိထားမိသည်မဟုတ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်တန်းသားများကိုသောက်သုံးခြင်းနှင့်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအကြောင်းကိုပုံစံမျိုးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ဝသကဲ့သို့နိုင်ငံရေး၏လေးနက်သောကိစ္စရပ်များအပေါ်သူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသဘောထားကွဲလွဲသတိထားဖြစ်အဖြစ်ဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။
app ကိုမရှိတော့ကံမကောင်းကစားရန်မရရှိနိုင်ပေမဲ့, ကသုတေသီတွေကပျော်စရာတစ်ခုခုသို့စံသဘောထားကိုစစ်တမ်းကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုကောင်းတဲ့ဥပမာအားဖြစ်ခဲ့သည်။ ပိုများသောယေဘုယျအားဖြင့်အချို့တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဒီဇိုင်းအလုပ်အတူကစစ်တမ်းပါဝင်သူများအတွက်အသုံးပြုသူ-အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန်တတ်နိုင်သမျှဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကစစ်တမ်းတစ်ခုဒီဇိုင်းနေကြသည်လာမယ့်အချိန်, သင်သည်သင်၏သင်တန်းသားများကိုများအတွက်အတွေ့အကြုံပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်လုပ်နိုင်သောအရာကိုစဉ်းစားရန်ခဏယူပါ။ တချို့က gamification ဆီသို့သည်ဤခြေလှမ်းများဒေတာအရည်အသွေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းကိုကွောကျရှံ့စခွေငျးငှါ, ဒါပေမယ့်ငါပျင်းသင်တန်းသားများကိုဒေတာအရည်အသွေးဝေးသော သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်ရှိကြောင်းထင်ပါတယ်။
ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရပ်ကွက်စစ်တမ်းများချိတ်ဆက်: Goel နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏လုပျငနျးကိုလည်းလာမယ့်အပိုင်း၏အဓိကအကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Facebook ကိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏စစ်တမ်းချိတ်ဆက်အားဖြင့်သုတေသီများအလိုအလျောက်သင်တန်းသားများကို '' သူငယ်ချင်းစာရင်းတစ်ခုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ လာမယ့်အပိုင်းမှာတော့ကျနော်တို့က သာ. ကြီးမြတ်အသေးစိတ်အတွက်စစ်တမ်းများနှင့်ကြီးမားသောဒေတာသတင်းရင်းမြစ်များအကြားချိတ်ဆက်စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။